क्रसफायरका नयाँ मोटरसाइकलहरू नेपाली बजारमा, बुकिङ्ग खुल्ला
नेपाली पब्लिक शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७
नेपालमा क्रसफायरका नयाँ मोटरसाइकलहरूकाे बुकिङ्ग खुलेकाे छ। क्रसफायरकाे नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सोलफुल मोटर प्रालि (Soulful Motor Pvt. Ltd) ले नयाँ क्रसफायर एचजे २५० (Crossfire HJ 250) र क्रसफायर जिआर७ २५० (Crossfire GR7 250) को लागि बुकिङ्ग खुला गरेकाे हाे।
यी दुबै माेटरसाइकलमा २४९.६ सीसीकाे लिक्विडकुल्ड इन्जिन (liquid-cooled engine) रहेको छ। जसले अधिकतम ३०.१५ बीएच पावर र २३ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ। यसमा ६ स्पीडकाे म्यानुयल गियरबक्स दिईएको छ।
फरक विशेषता समेटिएक यी माेटरसाइकलहरूमा एलइडी हेडलाईट, एलइडी टेलल्याम्प, एलइडी टर्निङ लाइट, क्यूबीक हेडलाईटस् र डिजिटल इन्ट्रुमेन्ट कन्सोलकाे फिचर दिइएको छ। ३३० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको यी मोटरसाइकलकाे अगाडिको टायर २१ इन्च र पछाडिको १८ इन्च रहेकाे छ दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेकिङ सिस्टम समावेश गरिएकाे छ।
कम्पनीले एचजे २५० को मूल्य ६ लाख १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेर बुकिङ लिइरहेको छ। त्यस्तै जिआर७ भने डर्ट र मोटार्ड (Dirt and Motard) गरि दुई भरिएन्टमा उपलब्ध रहेकाे छ। कम्पनीले डर्ट भरिएन्टको मूल्य ५ लाख २७ हजार ताेकेर बुकिङ लिइरहेको छ भने मोटार्ड भरिएन्टकाे मूल्य ५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ताेकेकाे छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७ १६:३३
आइतबार, वैशाख १२, २०७८ १५:३० होण्डाको डिस्ट्रीब्यूटर बन्न चाहनुहुन्छ? यसरी भर्नुहोस आवेदन
बिहीबार, जेठ २९, २०७७ १९:१३ पल्सर १२५ काे मूल्यमा वृद्धि